Networkkpụrụ mmekọrịta IZIR Don'tTA - Bụrụ onye SNOB | Martech Zone
Tọzdee, Nọvemba 30, 2006 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Nke a na-eme ka ọ ghara ịmalite ruo oge ụfọdụ mana m ga-aga n'ihu ma kwuo ya, ịntanetị nwere ọnụ ọgụgụ ziri ezi nke oghere ** dịka ụwa ndị ọzọ. Hah… phew, ekwuru m ya. Ahụ adị m mma karịa.
Lee anụ m. Ịkparịta ụka n ’mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ ihe kacha mma webusa kemgbe… hmmmm…. nke ọma, ka anyị kwuo na ọ bụ ihe kachasị mma emetụgo na ntanetị. Enwere m mmasị na ike inwe ike ịkpọpụta nkwenye m, echiche m, na mmegide m. Ọ na-amasị m ịnụ echiche na ndụmọdụ ndị ọzọ - ọbụlagodi mgbe m na-ekwenyeghị.
Oge ụfọdụ websaịtị a na - enweghị atụ na - adị ka ọ bụ obodo pere mpe, pere mpe. Enwere m ndị na-agụ akwụkwọ na-aga eleta blog m oge niile, ma enwere ụyọkọ ndị na-ede blọgụ na m nwere mmasị na afọ ole na ole gara aga.
Nke ahụ kwuru, gịnị kpatara mmadụ ji esonye na obodo a naanị ka ọ bụrụ onye obi tara mmiri? Gini bu ihe banyere ndu ha nke di oke njo nke na ha gha agha na onlinentanetị ma weghaara onwe ha igbasa nsogbu ha nye ndi ozo? Olee otú ndụ gị ga-adị?
Otu di na nwunye mere n’oge gara aga mere m. Nke kachasị ọhụrụ bụ na a hụrụ ụfọdụ koodu m na saịtị m wee bulie Reddit.com site n'aka gent nke akpọrọ 'gizmo'. Amaghim gizmo, mana enwere m obi uto na o weputara oge ma tinye njikọ ya.
Lelee ihe ndị a kwuru! SNOBS! Ọbụna nke ka mma bụ mgbe otu saịtị m nọ na mbara ala Ajaxian. Lee anya na ihe ndị ahụ! Naanị ihe na-afụ ụfụ. Achọghị m ka m daa. Enwere m ngwa ọrụ dị jụụ, ejiri m teknụzụ dị jụụ, etinye m ya maka ndị folks. Ọbụna n'efu! Ọ dịghị onye ga-aga ya, ma ọ bụrụ na ha emee, ha agaghị akwụ ụgwọ maka ya.
Isi okwu bụ na ọ nweghị ihe mere ị ga - eji bụrụ SNOB. Inye ndụmọdụ, nzaghachi, ndụmọdụ, nchegbu, pointer, nkatọ na-ewuli elu methods ụzọ ndị a niile 'nabatara'. Ihe ndị a niile bụ ihe na - enyere anyị aka ịgbanwe ma bụrụ ọkaibe n’ihe anyị na - eme na ihe anyị ma. Bụ SNOB anaghị enyere aka. Ọ tinyeghi uru na 'netwọkụ mmekọrịta'.
Na na na… ezu nke m rant. Kedu ihe bụ SNOB? Oge ọzọ mmadụ nwere obi ọjọọ, enweghị nkwanye ugwu, ma ọ bụ bụrụ onye amaghị ihe ọ bụla na saịtị ịkparịta ụka n'Socialntanet, ị nwere ike izigara ha ihe osise ahụ n'aka nri! Enwere ike iji nke ọ bụla n'ime eserese ndị a ebe ọ bụla ma agbanyeghị ịchọrọ. Ziga ha ebe a ma oburu na ha choro nkowa zuru oke.
Ma ọ bụrụ na ị bụ SNOB, gaa n'ihu. Echegbula iwe m na nke a - naanị m ga-ehichapụ ya.
Tags: snobsnobselekọta mmadụ media
Dee 1, 2006 na 6: 44 AM
Doug, nwute na ị ga-enwupụta ọwara carpal gị iji gwa anyị gbasara ụmụ okorobịa ahụ na-adịghị mma na Ajax Planet. Enwere m hecklers na ìgwè mmadụ ọ bụla, echere m. Kpee ekpere maka em. Nke ahụ bụ ihe Ọ ga-eme. Ma na-eme ihe ị na-eme. Na n'ike mmụọ nsọ m!
Dec 1, 2006 na 2:14 PM
Ọ dị m ka ọ dị, e nwere ọtụtụ ndị na-eme ihe ike wannabe n'ebe ahụ, ha na-eche na ha nwere ike harrass ma kpalite sh *** n'ihi na ha "amaghi aha" na ịntanetị. Peoplefọdụ ndị mmadụ na-apụ ịnyịnya ibu. Izọ m si ele ya anya bụ na ha nwere ọmịiko, ndị owu na-ama na ha ekwesighi ịzaghachi ma ọ bụ ichegbu onwe ha.
Dec 1, 2006 na 2:33 PM
Nwoke ị bụ wimp
Dec 1, 2006 na 6:13 PM
Enweghị m ike ijide aka ma chịa ọchị na nzaghachi gị. Daalụ maka iwepụta oge.
Dec 1, 2006 na 6:39 PM
Daalụ Pat na CJ maka nkwado!
Dec 5, 2006 na 7:55 PM
Daalụ, Carl! Ikike CC agbakwunyere n'okpuru peeji nke peeji a dabere na nkwanye gị.
Dec 5, 2006 na 7:00 PM
Anọ m na-eche mgbe mmadụ ga-agagharị na omume a na-aba ụba. Aga m agbaziri baajị gị ma zigara ya ndị ọzọ. Ya mere echefula CC ikike ya 😉
Dec 6, 2006 na 3:39 PM
Doug anyị niile hụrụ gị n'anya, anyị kwesịrị iti ụfọdụ ịnyịnya ibu, ọ bụrụ na anyị mee ka m mara, m ga-anwa ịchọta ụmụ okorobịa ka nwere ike. Enwere m ike ma ọ bụghị ogologo oge